Wheelchair Crash Test Mhedzisiro
Ruzivo rwekutanga kubva kune Ino Rehabilitation Injiniya Yekutsvagisa Center (RERC) paWheelchair Yekufambisa Yekuchengetedza
Maitiro e hwiricheya kutakura Kuchengetedza kwakagadzirwa neAnsi / RESNA uye ISO, ayo ari eUS uye epasi rose masangano emasangano. Aya matanho anoda kuti chero wiricheya kuchengetedza system, inodzora inodzora system kana manyorerwo / simba wiricheya kubudirira kupasa 30mph / 20g kukanganisa sled bvunzo.
Mugadziri wechigadzirwa anotora hunyanzvi hwekushanda pamwe nenzvimbo yekuyedza kusangana nezvinodiwa pakuedzwa kwechibvumirano. (Verenga nezve maitiro ekuyedza kuYunivhesiti yeMichigan Yekufambisa Yekutsvagisa Institute.)
chete apo tekinoroji yekuchengetedza tekinoroji yabudirira kupasa bvunzo yeseleti inogona kugadzirwa murandu kuti mudziyo wavo unoenderana ne kutakura kuchengeteka mureza. Aya matanho anotsanangura zvakadzama mashandisiro anoita zvigadzirwa, kuyedzwa, uye kunyorwa. (Unogona kuverenga zvakawanda nezve zviyero pa zviyero chikamu che ino webhusaiti kana kutenga kopi yematanho kubva kuRESNA.)
Kune iye mutsva, ngatishandure iyo "30mph / 20g" maitiro. Zvinoreva kuti iyo wiricheya neiyo yekufambisa tekinoroji tekinoroji uye iko kupaza bvunzo dummy anogara anoratidzwa kune akafananidzwa kumberi-kumagumo kurovera. Iyo wiricheya uye iyo dummy inosangana ne30 mamaira paawa shanduko muvelocity uye kudzikisira kwakaenzana neka20 nguva simba regiravhiti.
Muhupenyu chaihwo, ye wiricheya mutasvi anorema 180 mapaundi (81.6 kg) izvi zvinogadzira huwandu hwesimba. Makumi maviri g ari kuita pa180 lbs ehuremu anoshandura musimba rinenge mazana mazana matatu nemazana matatu. (Fungidzira kuyedza kubata 3600 lb beach bhora!)
Iyi "30mph / 20g" yekukanganisa maitiro ndiyo imwecheteyo nzira inoshandiswa mukuyedza mota dzese uye kudzivirirwa kwevana kana zvigaro zvemotokari. kushandisa iyi imwechete nzira kana uchiedzwa wiricheya kutakura chengetedzo matekinoro inoitirwa kupa zvakaenzana kuchengetedzwa kwe wiricheya vatasvi.
Shandisa akateedzana emavhidhiyo ari pamapeji anotevera kuti uzvidzidzise nezve kukosha kwekufamba kwekuchengetedza matekinoroji. Imwe neimwe yekuyera bvunzo mavhidhiyo inoratidza mupiro wechimwe chinhu che kutakura technology yekuchengetedza-wiricheya kuchengetedzeka, kugara kwevanhu kana kushandisa WC19-inoenderana wiricheya. Miedzo yekuparara yakaitwa munzvimbo yekuyedza kuYunivhesiti yeMichigan kutakura Research Institute (UMTRI).
Sarudzo yakanakira chero mufambi ndeye chinja kuchigaro chemotokari uye pfeka mabhandi emota ekufambisa. Nekudaro, kana kuchinjisa kuchigaro chemotokari kune njodzi zvakanyanya kana zvisingaite, munhu akatasva akagara mu wiricheya inofanirwa kushandisa ese matatu matekinoroji ekuchengetedza tekinoroji kugadzira zvakakwana kutakura kuchengeteka.
Tambo dzese ina dzinodiwa kuchengetedza iyo wiricheya kuguruva remotokari. Iyi nzira inowanzo shandiswa mumabhazi ekufambisa, emabhazi eparatransit, emabhazi echikoro uye mumavhenesi ane vanhu. Inoshanda mushe musetwa nekuti tambo dzinoshanda nemhando dzakawanda uye masitaera e mavhiripu. Chiyero chekuyedza simba rekuchengetedza kweiyo wiricheya kune pasi pechimota chine tambo kana docking system yakafanana neyakajairwa kushandiswa kuyedza kubatanidzwa kwemotokari kana chigaro chebhazi kufuremu yemotokari.
Chinangwa che 4-poindi chengetedzo ndeye kubatanidza matambo kune iyo wiricheya furemu pazasi pekusanganiswa kwepakati pehukuru hwe wiricheya uye inogara. Makona kubva pasi kusvika kune wiricheya zvinotsanangurwa zvakaringana mukati meyakajairwa kuitira kuti vagadzikise chigaro uye kudzivirira kupidiguka, kutenderera uye kufamba kumberi.
Izvo zvakakosha kushandisa ese mana tambo. Vamwe vatyairi vemabhazi, zvekufambisa kana vafambi vanogona kufunga kubatanidza chete tambo idzo dziri nyore kusvika. Kwete kushandisa tambo dzose ina dzinoisa mutoro wakawandisa pamabote anoshandiswa uye zvinogona zvakare kutungamira mukutsvedza.
Aya mavhidhiyo anotevera anoratidza zviitiko zvakasiyana sekutadza kushandisa kuchengetedza kana kushandisa chete kumberi kumwe uye rimwe kumashure tambo. Vhidhiyo yekupedzisira inoratidza kushandiswa kwese tambo ina.
Iyi ndiyo 30mph yekumberi dhizaini bvunzo yeasina kuchengetedzeka uye isina kugarwa mubatsiri wiricheya.
Iyi ndiyo 30mph yekumberi dhizaini bvunzo yeasina kubatwa mubatiro wiricheya yakachengetedzwa netambo ina dzakasungwa.
Matatu-poindi Anogara Anodzivisa
mushure wiricheya yakachengetedzwa pasi pechimota, chinotevera chinangwa ndechekuchengetedza iyo wiricheya mutasvi mu wiricheya. Kufa kwakawanda kwakanangana nemotokari uye kukuvara kunoitika mune zvechipiri zvinokanganisa senge munhu anenge arova mukati memotokari kana aburitswa kubva pairi.
Ndidzo nhengo dzemabhonzo dzemuviri chete dzinogona kumira nemasimba akasimba kuzorwa nemuviri neanodzora. Kuzvidzivirira kwevatatu-poindi kunoshanda kunge bhandi rechigaro mumota. Chikamu chepelvic cheakanakisisa chinoenda pasi uye chinotsvedza nepakati pechiuno.
Chikamu chechipfuva chinouya kubva pamadziro emota uye chinoyambuka kora bone uye chipfuva chepfupa kunamira mukati mechiuno. Kana kugara kwekugara kusingayambuki nzvimbo dzemabhonzo, kwakakosha kuipa kune zvinyoro nyoro zvinogona kuitika.
Zvakakosha kushandisa zvose Zvikamu zvitatu zvekudzivirira. Dzese mota dzinofanirwa kunge dziine nzira yekushandura pakatangira poindi yechipfuva pamadziro emota. Iko kuchinjika kweiyi mavambo poindi inobvumira iyo torso yekudzivirira bhandi kuti ikwane chero munhu murefu kana mupfupi munhu.
Nekuti a wiricheya ine "seatbelt" ine mota kana yendege dhizaini buckle inoita kwete kureva kuti bhandi iri i chengetedzo bhandi. Mazhinji mabhandi ekumisikidza haana kusungirirwa kune iyo furemu ye wiricheya. Dzinongopetwa mumaseiri enzvimbo.
Aya mavhidhiyo anotevera anoshandisa mumwe mukadzi wiricheya (a wiricheya yakagadzirirwa kudzokororwazve-kupaza-kuratidza) mupiro we3-poindi yekugara inodzora.
Vhidhiyo yekutanga inoratidza mhedzisiro ye kushandisa hapana kuchengetedzeka zvachose. Izvi zvinopa kutaridzika kwakajeka kwezvinorehwa nemutsara uyu: "zvinokanganisa zvechipiri."
Yechipiri inoratidza mhedzisiro ye kushandisa mushure memisika yekumisikidza zvishandiso senge butterfly harnesses, hook uye loop mabhandi, nezvimwe.
Chechitatu chinoratidza kufamba kwakanyanyisa kwetembere yepamusoro kunoitika panongoshandiswa chikamu chemuuno. Izvo zvinoita, zvakadaro, zvinodzivirira kukanganisa kwechipiri.
Vhidhiyo yechina inoratidza kufamba kwakanyanyisa kunoitika panongoshandiswa chete fudzi / chifuva chikamu. Iyi kufamba, inonzi "submarining," inogona kutungamira kune yakakosha kuipa kunhengo dzemukati kana kuvharika kwenzira yemhepo.
Vhidhiyo yekupedzisira inoratidza chengetedzo inopihwa yakamisikidzwa, 3-poindi yekugara inodzora.
kushandisa HERE wiricheya kugara mukati
Iyi 30mph yekumberi kukanganisa bvunzo isina anogara anodzora bhandi.
kushandisa chete "zvigadzirwa zvekutsigira kumashure" *
Uyu ndiwo 30mph wepamberi kukanganisa bvunzo kushandisa mabhandi ekumashure-ekutsigira chete.
Uyu ndiwo 30mph wepamberi kukanganisa bvunzo kushandisa chete mota-yakasungirirwa pelvic bhandi kudzora.
kushandisa anogara mukati anodzivirira bhandi rinofamba pamusoro pechigaro che arm wiricheya Panzvimbo pekutsvanzvadzira muviri.*Izvi zvinobvumira kufamba kunodaidzwa kunzi "submarining" uko kune mukana wekukonzeresa kukuvadza hupenyu kunhengo dzemukati, mutsipa nemudenga. Uyu ndiwo 30mph wepamberi kukanganisa bvunzo kushandisa mota-yakamisikidzwa-nhatu-poindi bhanhire inodzora nebhande repachiuno rakaiswa pamusoro pe wiricheya zvigaro zvemaoko.
kushandisa yakaringanira 3-poindi yekugara inodzora.Uyu ndiwo 30mph wepamberi kukanganisa bvunzo kushandisa yakamiswa zvakanaka, mota yakamiswa, matatu-anonongedza bhandi.
kushandisa inoenderana neWC19 wiricheya
Iyo WC19 inoenderana wiricheya ndicho chikamu chitsva chezvekufambisa tekinoroji. Iyi ANSI / RESNA standard, yakapasa muna Kubvumbi 2000, inotsanangura a wiricheya iyo inogona kumira masimba ekuputsika. Iyi yeAmerican standard yekutama yakaedzwa mavhiripu yakafanana neIO neCanada zviyero.
mushure wiricheya yakachengetedzwa pasi pechimota, uye iyo wiricheya mutakurwi ibhandi kushandisa kuchengetedzwa kwekudzivirira, icho chinotevera chinangwa kugara munhu mufambi mu wiricheya yakagadzirirwa kuve chigaro mumotokari. Zvakawanda mavhiripu HAUNA akakodzera mapoinzi ekubatanidza tambo. Zvimwe mavhiripu usatendese chinamato pakukwirira chaiko pane iyo wiricheya furemu. Mutyairi wemota anosara kufungidzira nzvimbo yakanaka.
Zvimwezve wiricheya mafuremu haana kusimba zvakakwana kuti angomira nemasimba epasuru yekuyedzwa yekukanganisa kupomba. Nekuti a wiricheya ine "seatbelt" ine mota kana yendege dhizaini buckle inoita kwete kureva kuti bhandi iri ibhandi rekuchengetedza.
Mazhinji mabhandi ekumisikidza haana kusungirirwa kune iyo furemu ye wiricheya. Dzinongopetwa mumaseiri enzvimbo. Velcro uye yekumisikidza mabhandi ane mabhureki inopa kukwana kukwana kwengozi kudzivirirwa pasi pemitoro yakakura.
kana wiricheya rakanyorwa kuti WC19 inoenderana, zvinoreva kuti izvi wiricheya modhi inowanikwa neyakafa-yakaedzwa furemu uye yekufambisa Hardware uye a wiricheya yakasungirirwa chengetedzo bhandi.
The wiricheya, painogadzirirwa nesarudzo idzi, sled yakaedzwa nehukuru hwakakodzera hweyedzo dummy sezvinodiwa neyakajairwa. Iyi webhusaiti ine up-to-date, yakazara mazita eWC19 inoenderana nemawiricheya.
Iyo WC19 standard inoitirwa kusimbisa kuti a wiricheya inochengetedzwa nyore nyore uye mutengi anodzorwa zviri nyore. Aya maficha anoita kuti zvive nyore kutevedzera zvikamu zviviri zvekutanga zveyambiro yekuchengetedza tekinoroji; iyo 4-poindi wiricheya kuchengetedzeka uye 3-poindi yekugara inodzora.
Aya mavhidhiyo anotevera anoratidza mupiro weWC19 wiricheya:
Vhidhiyo yekutanga ndeye isiri-WC19 inoenderana wiricheya.
Vhidhiyo yechipiri munhu mukuru muWC19 inoenderana simba wiricheya.
Vhidhiyo yechitatu ndeye mwana muWC19 inoenderana wiricheya yemawoko.
Vhidhiyo yechina mwana ari muWC19 inoenderana simba wiricheya
Chiyero chakapetwa neisina-WC19 inoenderana wiricheya yemawoko.
Iyi 30mph yekumberi kukanganisa bvunzo neisina WC19-inoenderana wiricheya yemawoko uye munhu mukuru crash-test dummy (ATD) inodzivirirwa nemotokari-yakasungirirwa, matatu-anonongedza bhandi.
Uku ndiko 30mph yekumberi kukanganisa bvunzo yeWC19-inoenderana inofambiswa wiricheya uye munhu mukuru crash-test dummy (ATD) inodzivirirwa nemotokari-yakasungirirwa, matatu-anonongedza bhandi.
Iyi 30mph yekumberi dhizaini bvunzo yeWC19-inoenderana mutyairi wiricheya uye ane makore matanhatu ekuberekwa-test dummy (ATD) yakadzorwa nemotokari-yakasungirirwa, bhandi-nhatu-nhete wiricheya-akagadziriswa pelvic bhandi kudzora.
Chiyero chakapetwa nemwana muWC19 inoenderana simba wiricheya.
Uku ndiko 30mph yekumberi kukanganisa bvunzo yeWC19-inoenderana yevana inofambiswa wiricheya uye ane makore matanhatu ekuberekwa-test dummy (ATD) inodzivirirwa nemotokari-yakasungirirwa, matatu-anonongedza bhandi.